Moskow: Kulanka Taariikhiga ah ee Madaxweyne Putin & Boqor Salman – Kasmo Newspaper
Moskow: Kulanka Taariikhiga ah ee Madaxweyne Putin & Boqor Salman
Updated - October 5, 2017 9:30 am GMT
London (Kasmo), Boqorka Sucuudi Carabiya, Salman bin-Cabdulcasiis ayaa booqasho heer sare ah ku jooga Russiya, markii u horreysay taariikhda, tan iyo aasaaskii Boqortooyada, sannadkii 1932kii.
Booqashada oo qaadan doonta 4ta ilaa 7da Oktoobar waxaa lagu falanqayn doonaa arrimo ay ka mid yihiin maalgashiga iyo iyada oo la iska kaashado dhibaatooyinka Woqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe.
In kasta oo Russiya ahayd dalkii u horreeyay oo aqoonsada madaxbannaanida Sucuudiga, wali ma dhicin hadda ka hor, Boqor Sucuudi ah oo cagaha soo dhiga Moskow.
Laakiin dhanka Russiya, Putin ayaa 2007dii noqday hoggaamiyihii u horreeyay oo Ruusha ah oo booqda Sucuudiga, ha yeeshee arrimihii dhaqaalaha iyo nabadgalyada ee uu kala soo hadlay Boqor Cabdalla lagama qaadin miiska dushiisa.
Laakiin doorkaan waxaa laga hadlayaa xoojinta iskaashiga Moskow iyo Riyadh iyo waan-waanta dagaallada ka soconaya Yaman iyo Suuriya iyo waliba arrimaha Saliidda. Labada dal oo tartanka ugu weyni ka dhexeeyo, marka la isu geeyo wax soo-saarkooda Saliidda wuxuu isku noqonayaa kala bar Shidaalka adduunka oo idil quuto.
Booqashada Boqorka waxaa ka horreysay mid uu wiilkiisa dhaxal-sugaha ah, Maxamed bin-Salman ku tagay Moskow, 30kii May 2017, isaga oo kulammo muhiim ah la qaatay mas’uuliinta Russiya. 2da dal ee Saliidda ugu badan soo saara waxay aragtiyo kala duwan ka qabaan arrimaha Suuriya iyo kaalinta Iiraan ee Bariga Dhexe, laakiin waxay heshiis ku yihiin arrimaha Saliidda iyo suuqyadeeda.
Kulanka maanta ee 2da mas’uul ka hor waxaa furmaya Shirka maalgashiga “Russia-Saudi Economic Forum” oo ay ka qaybgalayaan in ka badan 200 oo Shirkadood oo 2da dal ka soo jeeda. Maalinta barri ahna Boqor Salmaan wuxuu la kulmi doonaa R/Wasaaraha Russiya, Medvedev oo uu kala hadli doono maalgashiga mashaariic guud oo ka dhexeysa.